Ganacsiga iyo dhaqaalaha - Horn Future
22 January 2018, 3:19 am
Xukuumadda Turkey oo sameeynaysa hay’ad qaabilsan habka loo yaqaano(Halal) ama Xalaal
ANKARA(Horn Future)-Xukuumadda Turkey ayaa u gudbisay baarlamaanka xeer qabyo ah sidii loo dhisi lahaa hay’ad la aqoonsan yahay oo qaabilsan habka loo yaqaano(Halal) ama Xalaal sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Hay’addan ayaa waxay noqon doontaa tan kaliya ee awoodda u leh bixinta shahaadada badeecada (halal/xalaal) ee aqoonsiga dalka Turkey,iyada oo sidoo kale awood u yeelan […]
Baanka( BNP Paribas) ee saldhigiisu yahay Paris oo lagu eedeeyay shirqoolka xasuuqii Rwanda
Paris(Horn Future)-Baanka saldhigiisu yahay magaaladda Paris ee lagu magacaabo ( BNP Paribas) ayaa lagu eedeeyay shirqoolka xasuuqii Rwanda ee 1994-kii kadib markii uu u diray lacag nin ka ganacsada hubka, sida uu sheegay xeer-ilaaliyaha Fransiiska. Sida laga soo xigtay televishanka dawladda ee( Franceinfo), xeer-ilaaliyeyaasha Paris ayaa furay baadhitaan buuxa oo ku saabsan xasuuqan kadib markii […]
Magaalooyin Swiss ah oo ka codsaday dawlada inay siiyo dal kugalka shaqaalaha shisheeyaha
Zürich (Horn Future)-Magaalooyinka Basel, Geneva iyo Zurich ee dalka Switzerland ayaa ku dhawaaqay baahida loo qabo shaqaale shisheeya ah oo dheeraad ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Germany. Magaalooyinkaas ayaa waxay ugu baaqeen xukuumadda Swiss maanta oo Salaasa ah inay bixiso dalku-gal(visa) dheeraad ah oo la siinayo xooga shaqaale ee ka imanaya dalalka loogu […]
Berlin (Der Spiegel )-majjallada Der Spiegel ee todobaadle ah ayaa taliyayaasha imaarada Abu Dhabi dusha ka saartay masuuliyada inay kacdo shirkadda diyaarada ee (Air Berlin) oo ah diyaarada labaad ee ugu weyn dalka Germany oo dhan. Waxay ku tilmaamtay in shirkaddani ay soo gudbiso maalintii Salaasadii codsi ay ku sheegtay inay kacday sida tallaabo lama […]
Riyadh(Horn Future)-Warbixin la soo saaray ayaa ku qiyaasay tirada shaqaalaha shisheeye ee ka tagi doonta boqortooyada Sucuudiga ku dhawaad 670 kun ilaa sanadka 2020,iyada oo tallaabadani ay kusoo beegmayso bixinta kharashka cashuurta lagu soo rogay dadka weheliya shaqaalahan bil kasta. Sida ku cad warbixintan oo uu soo saaray baanka Sucuugiga-Fransiiska ee loo soo gaabiyo (BSF), […]
Riyadh (Horn Future)-Qoyska Sucuudiga ee maamula dhulka barakaysan ayaa bilaabay inay ku soo rogaan cashuur bil walba qoysaska deggan ee shisheeye ee ka shaqeeya waaxaha gaarka ah iyo shaqaalahooda,taas oo qiimeheeda lagu qiyaasay( $ 26.6,million) malyuun oo dollar sida ay qortay warbaahinta caalamku. Tallaabadan cusub ee qoyskan ayaa lagu tilmaamay mid uu ku ururinayo lacago […]
Geneva(Horn Future)-Waxa dunida kor kacay qiimaha cuntada bishan June sababo la xidhiidha qiimaha qamadida iyo hilibka oo sare u kacay sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ee (FAO) maanta ooa Khamiis ah. Qiimaha cuntada ayaa waxa isku celcelis ahaan uu kor u kacay 175.2 dhibcood bishan June,taas […]
Istanbul(Horn Future)-Wasiirka dhaqaalaha ee Turkey Nihat ayaa sheegay in Turkey ay u dirtay Qadar 5 kun oo tan oo raashin ah oo saarnaa 71 diyaaradood oo xamuul kuwaas oo u duulay Doxa tan iyo bilowgii dhibaatada Gacanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu. Waxa wasiirku intaa ku daray hadal uu ka jeediyay shirka Golaha […]
Ankara (Horn Future)-Russia ayaa ku dhawaaqday inay ka qaaday dalka Turkey cunaqabatayntii ganacsiga maanta oo Jimca ah taas oo ay kusoo rogtay kadib markii Turkey dhulka ay soo dhigtay diyaarad Russia ay leedahay oo kusoo xadgudubtay soohdinta hawadeeda sanadkii 2015 sida ay qortay warbaahinta Turkey. War qoraal ah oo uu soo saaray taliska Russia ayaa […]
Beijing –Waxa maanta oo Jimca ah markii ugu horeeysay ka duushay diyaarad nuuca dhexdhexaadka ah oo loogu magac daray”C-919″ oo uu soo saaray China,tallaabo ka turjumaya hore-umarka farsamo iyo hamiga Beijing ee ah sidii ay ula tartami lahayd labada shirkadood ee dunida ugu weyn ee reer Yurub ee(Airbus) iyo Maraykanka ee( Boeing). Diyaaradan oo ay […]
Nairobi -(Reuters)-Baanka dhexe ee dalka Kenya ayaa waxa uu soo saaray oggollaansho uu siiyay baanka( Dubai Islamic Bank) kadib markii uu joojiyay oggollaanshaha baanan cusub sanadkii 2015. Waxa baanka dhexe ee Kenya uu sheegay go’aankan uu ku dhawaaqay Jimcihii in uu ka dhigayo (Dubai Islamic Bank- Kenya), baankii saddexaad ee Kenya ee si buuxda u […]
Midowga Yurub oo uga digay Britain adeegyada maaliyadeed ee ka baxsan heshiiska ganacsiga
London(Reuters)-Diblomaasiyiin ayaa sheegay in madaxda Midowga Yurub ay xasuusinayaan Britain in aynan dhici karin inay damacdo in lagu daro waaxda adeegyada maaliyadeed ee Britain in ay qayb ka noqdaan heshiiska ganacsiga ee xorta ah ee la doonayo in uu dhexmaro kadib marka ay ka baxdo Ururkan. France iyo dalalka kale ayaa xaqiijiyay intii lagu guda […]
Dalka China oo oggollaaday 38 sumaddood oo kamid ah summaddaha Trump ee ganacsiga
Washington(Reuters)-Wakaalada wararka ee( AP) ayaa soo xigatay qoraalo rasmi ah oo ah in China ay siisay oggollaasho aragti ahaaneed 38 sumaddood oo kamid ah summaddaha Trump ee ganacsiga, taas oo laga yaabo inay u oggollaato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qoyskiisa inay ka hirgeliyaan mashaariic sidata magiciisa halkaas. Wakaaladdan ayaa waxa ay intaa ku dartay […]
Sudan:Khasaaraha cunaqabateeynta dhaqaale naga soo gaadhay waa 45 milyaar oo dollars
Khartoum (AA)-Wasiirka maaliyadda Sudan Badrul-Din Maxmuud ayaa sheegay khasaaraha Sudan kasoo gaadhay cunaqabateeynta dhaqaale ee uu kusoo rogay Maraykanka in lagu qiyaasay 45 milyaar oo dollars. Wasiirka ayaa qiray shalay Salaasadii intii lagu guda jiray shir ka dhacay magaaladda Khartoum oo ku saabsanaa arrinta qaadida cuno-qabateeynta dhaqaale ee Sudan saameeynta cuno- qabateeyntani ay ku yeelatay […]
Trump oo ka furtay Dubai ganacsi cusub goor 7 wadan oo Islaam ah u diiday inay soo galaan Maraykanka
Dubai –Laba wiilal ah oo uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa ka furay Imaarada Dubai naadiga (Golf Clubs) ee ay maamulaan kooxda maaliyadda maguurtada ee Trump kaas oo noqonaya mashruucii ugu horeeyay ee muuqda tan iyo markii uu la wareegay xilka madaxtooyada bishii January ee la soo dhaafay. Ganacsade Imaaraadan u dhashay oo magiciisa lagu […]
Toyota Corolla oo xajistay horyaalka ugu iibinta badan summadda gaadhigan ee dunida 2016
Tokyo(AA)-Gaadhiga nuuca “Toyota Corolla” ayaa waxa uu xajistay horyaalka ugu iibinta badan gaadhigan ee 150 dowladood oo kuyaala dunida sanadkii 2016,kaas oo ka hormaray in ka badan 3,500 nuucyo ah oo baabuur ah oo ay soo bandhigeen shirkadaha baabuurta sameeya, sida ay ku dhawaaqday shirkadda Toyota ee Japan laga leeyahay. War qoraal ah oo ay […]
Morokko oo ku hanjabtay in ay joojin doonto iskaashiga dhaqaalaha ee ay la wadaagto Yurub
Rabat –Wasaaradda beeraha Morokko ayaa ku hanjabtay in ay joojin doonto iskaashiga dhaqaalaha ee ay la wadaagto Midowga Yurub,waxana ay sheegtay in ay diiradda saareeyso iskaashiga dalalka kale iyo ururadda, haddii Midowga Yurub fulin waayo shuruudaha heshiiska beeraha ee u la galay Morokko sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. War qoraal ah oo wasaaraddu ay soo […]
Oxfam: 8 maal-qabeeno ah oo haysta hanti u dhiganta hantida ay haystaan kala badh dadka dunida ku nool
Warbixin uu qoray ururka “Oxfam” ee caalamiga ah ayaa lagu sheegay in 8 ka mid ah maal-qabeenada dunida ay haystaan hanti u dhiganta mida ay haystaan kala badh dadka saboolka ah ee dunida ku nool. Warbixintu waxay intaa ku dartay in farqiga u dhaxeeya kala badh dadka dunida ugu saboolsan iyo kuwa ugu qanisan ay […]
Turkey oo kor qaaday 8% mushaharka ugu yar kaasoo ka bilaabmaya maalinta sanadka cusub ugu horeeysa
ANKARA-Turkey ayaa waxa ay kor qaaday 8% mushaharka ugu yar kaasoo ka bilaabmaya maalinta sanadka cusub ugu horeeysa, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Lacagtan la kordhiyay ayaa waxa ay ka badan 1,400 oo Liiraha Turkish ka bishii taasoo u dhiganta ($ 397) oo dollar sida uu sheegay wasiirka shaqada ee dalka Khamiistii. Wasiirka shaqada Maxamad […]
Turkey oo ku dhawaaqday in ay siinayso jinsadda shisheeyaha maal-gashiga ku sameeya dalka hantida maguurtada ah
Ankara –Dawladda Turkey ayaa ku dhawaaqaday in ay ka go’antay in albaabada ay u fureyso in jinsiyadda ay siiso hantiileeyda shisheeye ee aqalada ku leh Turkey taasoo ku dhalisay jawi rajo ah maal-galiyayaasha iyo shirkadaha ka hawlgala waaxda hantida maguurtada ah iyo dhismayaasha, taas oo ah mid kamid ah tiirarka muhiimka ah ee dhaqaalaha dalka […]